Manorata tsara any am-piasana: penina na fitendry?
Posted by Tranquillus | Jul 7, 2021 | Ny fahaiza-manaon'ny serasera sy ny serasera
Amin'izao fotoana izao, hitantsika fa manafika bebe kokoa ny fiainantsika isan'andro ny fanoratana fitendry. Matetika isika no manadino ny sora-tanana, izay, na eo aza ny fahombiazan'ny teknolojia nomerika, dia mbola ilaina toy ny taloha ihany. Manoloana izany dia ilaina ny manontany tena hoe inona no fomba tokony hararaotinao any am-piasana. Topy maso ny tsirairay amin'ireo teknika ireo.
Manoratra: ilaina amin'ny fianarana
Zava-dehibe ny fahalalana, indrindra raha mikasa hianatra fiteny vaovao ianao. Ny andalana amin'ny alàlan'ny sora-tanana dia hitondra anao plus. Eny tokoa, hisy fiatraikany lehibe amin'ny tsipelina sy ny famakinao izany.
Ankoatr'izay, fanadihadiana maro no naneho fa ny fianarana amin'ny penina dia ahafahanao mahafehy tsara kokoa ireo litera samihafa sy ny fahatsapan'izy ireo. Noho izany, ny fikarohana mifototra amin'ny sary sy ny neurosains. Hitan'izy ireo fa ny sora-tanana dia mampihetsika ireo faritra ao amin'ny ati-doha izay voakitika nandritra ny famakiana.
Midika izany fa ny fanoratana amin'ny tanana dia ahafahanao mampivelatra ny fahaizanao mamaky. Vokatr'izany dia ho afaka manatsara ny haavon'ny famakinao ianao ary mamaky haingana kokoa.
Rehefa mampiasa ny fitendry ianao dia tsy ampiasaina intsony ny memoara sensorimotor. Mampihena ny fahaizanao mamaky haingana izany.
Manoratra amin'ny klavier: sanda fanampiny
Etsy ankilany, ny zava-misy amin'ny fanoratana amin'ny tanana fa tsy amin'ny fampiasana ny keyboard dia tsy voatery hanampy lanjany amin'ny kalitao. Ny porofo dia olona maro no mahay kokoa amin'ny fanoratana lahatsoratra amin'ny klavier fa tsy amin'ny kinova tanana. Ankoatr'izay, misy ny mihevitra fa ny fampiasana ny klavier any am-piasana dia mamela azy ireo hamokatra lahatsoratra misy kalitao tsara kokoa.
HAMAKY Toro-hevitra dimy hanamaivanana ny fehezan-tenyo
Manome anao fitaovana maro isan-karazany ny solosaina ahafahanao manatsara ny lahatsoratry ny matihaninao. Vokatr'izany dia azonao atao ny misoroka ny lesoka amin'ny fitsipi-pitenenana ary koa ny lesoka amin'ny tsipelina.
Ho fanampin'izany, ny fanadihadiana dia naneho fa ny fitendry an-tariby dia misy fiatraikany amin'ny antony manosika hianatra hanoratra, indrindra fa amin'ireo olona tsy mahay manoratra. Eny tokoa, amin'ny solosaina dia manoratra ianao fa tsy manahy ny amin'ny endrik'ireo lahatsoratra. Ankoatr'izay dia tsy mila miahiahy momba ny lesoka satria azo ahitsy tsy misy famafana. Amin'ity lafiny ity dia tsikaritray fa ny fanitsiana rehefa manoratra amin'ny klavier dia vita mora kokoa satria misy fitaovana tafiditra ho an'ity asa ity.
Ary farany, tokony hanoratra amin'ny tanana na amin'ny fitendry ve ianao?
Ny fifehezana ny sora-tanana dia zava-dehibe toy ny fifehezana ny klavier. Raha eo amin'ny tsianjery dia miharihary fa ny sora-tànana no tombony lehibe indrindra satria mifamatotra amin'ny famakiana.
Na eo aza izany, raha ny amin'ny asa isan'andro dia mandresy ny fanoratana fitendry. Ny antony dia manamora ny hetsika rehetra mifandraika amin'ny fanoratana ny solosaina: kopia, apetaho, tapaho, hamafana, sns. Ny tombony hafa amin'ity fomba ity dia mamela anao handeha haingana kokoa noho ny manoratra amin'ny tanana. Tombony lehibe indrindra amin'ny tontolon'ny asa.
Manorata tsara any am-piasana: penina na fitendry? 15 Oktobra 2021Tranquillus
Teo alohaIzay rehetra tokony ho fantatrao momba ny paikady fanoratana any am-piasana
manaraka[Miverina any am-pianarana] - Miomàna amin'ny fiverenanao hiasa izao!
Ny mailaka miala haingana dia mety ho lasa mailaka mampidi-doza ho an'ny mpanoratra azy
Ny dingana drafitra hanoratana tsara
Hatraiza ny maha-zava-dehibe ny drafi-panoratana amin'ny asa soratanao?
Ny Tetik'asa Voltaire dia mandray anao amin'ny fifaninanana ara-pinoana mahafinaritra